फाप्लु विमानस्थलमा १३ दिनदेखि उडान अवरुद्ध – YesKathmandu.com
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको सदरमुकाममा रहेको फाप्लु विमानस्थलमा विगत १३ दिनदेखि उडान अवरुद्ध भएको छ ।
गएको १३ गते नेपाल एअरलाइन्सको एउटा उडान भएकोमा त्यसपछि विमानस्थलमा कुनै पनि उडान नभएको नेपाल एअरलाइन्स फाप्लुका निमित्त स्टेसन इन्चार्ज गणेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचनमा मतदानका लागि जिल्ला आएका राजधानी फर्कनका लागि टिकटको अत्याधिक माग भए पनि उडान नै हुन नसक्दा यात्रु मारमा परेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उता जिल्लाकै लुक्ला विमानस्थलमा पनि उडान प्रभावित भइरहेको छ । लुक्लामा बिहानीपख केही उडान हुने गरेको भए पनि आवश्यकताअनुसर उडान हुन नसकिरहेको तारा एअर लुक्लाका इन्चार्ज फुनुरु शेर्पाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दैनिक पाँच÷छ वटा उडान तालिका हुने गरेको भए पनि मौसम खुलेको मौका पारेर एक÷दुई उडान मात्र हुने गरेका छन् ।
फाप्लु विमानस्थल बन्द हुँदा यात्रुको चाप जिपमा परेको छ । अहिले सल्लेरीबाट राजधानी जाने जिपमा समेट टिकट पाउन मुस्किल पर्ने गरेको छ ।
यसअघि सल्लेरी–काठमाडौँ जिप भाडा रु एक हजार २०० रहेकोमा अहिले रु एक हजार ८०० सम्म असुल्ने गरेको एक जना यात्रु शिव खड्काले बताउनुभयो ।
व्यवसायीले भने वर्षात्का कारण जिप सञ्चालनमा समस्या हुने गरेकाले भाडा केही बढी लिने गरेको बताएका छन् ।
सरकार यी नागरिक होइनन् ?
सुकेटार विमानस्थल अवरुद्ध हुदा यात्रु मारमा
पोखरा–बागलुङ सडक एकतर्फी सुचारु
प्रधानमन्त्री कोइरालाका पहिलो रोजाई ओबामा दोस्रोमा मोदी
ओझेलमा ‘पाणिनीको तपोभूमि’
पेसागत मर्यादा र सपथको प्रतिबद्धतालाई लत्याउदै चिकित्सकको मनपरी, हजारौं बिरामी उपचारबाट बञ्चित
बाबुरामलाई अध्यक्ष बनाएर वैशाख पहिलो साता फोरम नयाँ शक्ति एक हुँदै
गृहमन्त्रीको आडमा यसरी सुरु भयो वाइसीएलको गुण्डागर्दी
सेभ द चिल्ड्रेन पछि विप्लवको टार्गेटमा को को ?
चीनबाट पहिलो विदेश भ्रमण थाल्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी, अर्थमन्त्री भारतमा